मलाई अर्चलिन्क्स मन पर्छ तर .... | लिनक्सबाट
मलाई आर्चलिन्क्स मन पर्छ तर ...।
तपाईं धेरैलाई थाहा छ, म प्रयोग गर्दैछु आर्चलिनक्स र मलाई लाग्छ यो समयको मेरो अनुभवबाट द्रुत निष्कर्ष निकाल्ने समय आएको छ।
संक्षिप्त रूपमा म यस वितरणमा देख्ने राम्रा र नराम्रा चीजहरूको पर्दाफाश गर्न जाँदैछु।
1.1 रोलिंग रिलीज:
1.5 चुम्बन द्वारा चुम्बन .. (KISS)
यो सत्य हो कि यस प्रकारको वितरण हुनु धेरै फाइदाजनक छ। हामी प्रत्येक months महिनामा प्रक्षेपणका बारे सचेत हुनुपर्दैन (को मामला मा जस्तै Ubuntu) र हामी प्याकेजको नयाँ संस्करणहरू बाहिर आउँदा मजा लिन सक्दछौं। त्यो मेरो संस्करण को लागी एक महान प्रोत्साहन हो।
यदि यस वितरणको बारेमा केहि राम्रो छ भने, यो यो हो कि तपाइँलाई सिक्न बाध्य पार्छ। यसको दैनिक प्रयोगको साथ तपाईं चीजहरूको अपरेशन बुझ्नुहुन्छ जुन उनीहरूले कसरी काम गरे भनेर तपाईंले कल्पना पनि गर्नुभएन। त्यो सामान्य प्रयोगकर्तालाई रुचि नहुन सक्छ, तर मँ गर्दछु।
को शीर्षकमा Conocimiento म यो थप्छु। सबै भन्दा राम्रो wiki त्यो हाल अवस्थित छ GNU / Linux समुदाय यो छ आर्क। तपाईले फेला पारेका चीजहरू उस्तै छन् Debian के लागि फेडोरा। तपाईंले भर्खर केही खोज्नु पर्छ र पढ्नु पर्छ।
के मा छैन AUR? मलाई लाग्छ तपाईं मरिसकेकाहरूको बाकस पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने। तपाईले प्रयोग गर्ने प्रणाली (जस्तै पोर्ट de मुक्त बीएसडी) मात्र महान छ।
चुम्बन द्वारा चुम्बन .. (KISS)
अर्को प्लस पोइन्ट जबकि केहि विचार अन्यथा, कन्फिगर आर्चलिनक्स यो यति गाह्रो छैन। तार्किक अर्डर अनुसरण गर्दै सबै एक खास ठाउँमा छन्। मलाई मेरो उपायको आधारमा चीजहरू निर्माण गर्न सक्षम हुन मनपर्छ, मलाई केहि पनि आवश्यक छैन।
यो ध्यान दिनु पर्छ कि मुख्य समस्या संग आर्चलिनक्स यो वितरण आफैंमा होईन, तर सीमितता को कारणले मेरो व्यक्तिगत रुपमा सम्पर्क र पहुँच छ इन्टरनेट। त्यहाँ धेरै प्याकेजहरू फेला परेका छन् AUR (टर्पियल, मार्लिन..इटीसी) र यसैले मेरो लागि ती दुर्गम छन्।
न त यो सँग एक सुपर शानदार प्रदर्शन गर्दछ Debian। यसको बाहिर मसँग अहिलेसम्म कुनै अन्य उजूरी छैन। म प्रयोग गरिरहन्छु आर्क ट्यूटोरियल पूरा नगरे सम्म को स्थापना Xfce, र त्यसपछि तपाईं पछाडि जान सक्नुहुन्छ डेबियन परीक्षण। 😀
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » वितरण » मलाई आर्चलिन्क्स मन पर्छ तर ...।
तपाईंले मलाई जुबुन्टु, डेबियन र टकसाल छोडेर आश्चर्यचकित बनाउनु भएको छ।
राम्रो नहिचकिचाउनुहोस्, elav को साथ समस्या जडान हो, अरु केहि छैन
एह फोहोर म हिम्मत गर्छु, तपाईं केडीई गाईडका साथ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ?
पहिले उनीहरूले मलाई छोड्नु पर्छ, र बेस प्रणाली म elav को लिंक गरेर प्रयोग गर्न सक्दछु, त्यसैले म पुन: स्थापना रद्द गर्दछु किनकि Virtualbox ले मलाई समस्या दिन्छ
यसले तपाईंलाई के समस्याहरू दिन्छ? के तपाईंले विकी सहि पढ्नुभयो? किनकि मैले कुनै समस्या बिना gnome3भर्चुअलबक्समा स्थापना गरें।
यो गल्ती हो कि बालुवाको मेलमा छ र उसले मलाई छिटो पठाएको छ कि म उनलाई खोज्छु र तिमीलाई भन्छु भनेर
ए मार्ग द्वारा तपाईंले याद गर्नु भएन जुन मैले तपाईंलाई माथि बोलाएँ, "फोहोर म भन्छु साहस" तपाईं अन्धा हुनुहुन्छ कि के?
यो छ कि म बाट टाढा छु जस्तो छ
शंका एकै कुराको लागि हो, मसँग १२ 128k इन्टरनेट जडान छ, तपाईं मेरो दुःखदायी जीवनको कल्पना गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईं कसरी चिट्ठा जित्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईं यसलाई खेल्नुहुन्न? केहि हिसाबले केही हासिल भएन
फ्रेडी म तपाईंलाई भन्न सक्छु कि AUR व्यावहारिक रूपमा कोर, अतिरिक्त वा सामुदायिक रिपोसको प्रयोग जस्तै हो, वास्तवमा aur एक स्क्रिप्ट प्रयोग गर्दछ जुन स्रोतहरू डाउनलोड गर्दछ र तिनीहरूलाई कमान्डको लागि कम्पाइल गर्दछ, यो व्यावहारिक रूपमा अन्य रिपोसको प्रयोग जस्तै हो। मैले एलाभको समस्यालाई ठीकसँग बुझ्न सकिनँ, हुन सक्छ मैले उनलाई बुझ्नको लागि उनको जुत्तामा राख्नु पर्थ्यो, यदि ऊसँग आधिकारिक रिपोमा समस्या छैन भने सैद्धान्तिक रूपमा आर्च यूजर रिपोजिटरीमा उनीसँग समस्या हुनु हुँदैन।
यदि यो कम कनेक्शन गतिको कारणले हो भने, यो त्यस्तो चीज हो जसले कुनै डिस्ट्रोलाई असर गर्छ, किनकि अन्यले तपाईंले अझै डाउनलोडहरू डाउनलोड गर्नुपर्दछ र कहिले हुँदैन, त्यसो भए आइ एसओ। केवल ती आर्चमा धेरै देखिएको छ, तर यो त्यस्तो कुरा हो जुन भ्रमपूर्ण हुन सक्छ।
त्यहाँ मेरो समस्या छ, जहाँ यो मबाट पहुँच नभएको फरक ठाउँहरूबाट स्रोतहरू डाउनलोड गर्नुपर्दछ।
खैर, त्यहाँ धेरै प्याकेजहरू छन् र म ती उपयोगी छ भन्ने कुरामा श ,्कास्पद छैन, तिनीहरूसँग पूरै ओएस हुनु आवश्यक पर्दैन, वास्तवमा मसँग १ have जति छन् जुन मेरो प्रणालीको सही सञ्चालनका लागि बिल्कुल आवश्यक छैन, मैले केहि मेट्नुपर्‍यो जुन मैले प्रयोग गर्दिन: D)
ठीक छ, तिनीहरूले मलाई विश्वास गरेका छन्, म उबन्टुमा वर्षौं देखि बसेको छु र परिवर्तनको समय आइसकेको छ, जब म सफल हुन्छु, म तपाईंलाई भन्नेछु।
म आर्च स्थापना गर्दै थिएँ, तर यस्तो लाग्छ कि मैले यसलाई गलत स्थापना गरेको छु: S
स्लवेयरवेयर स्थापना गर्नुहोस्, र म अझै यसलाई प्रयोग गर्दैछु। मलाई स्ल्याक मन पर्छ र धेरै कुरा सिकेको छु। मलाई थाहा छ कि यो धेरै जटिल छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ज्ञान प्राप्त गर्नु हो। =)
यो गलत स्थापना गरिएको जस्तो देखिन्छ
अनि तिमीलाई के भयो? उही चीज हो जुन मलाई थाँहा छ र म तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछु (हो एल्भा, माफ गर्नुहोस् ईलाभ को ईर्ष्या लाग्दैन हाहाहा)
मलाई लाग्दछ कि यो ग्राफिक्सको बारेमा केही थियो, किनकि म केडीई स्थापना गर्न चाहन्न र मैले Xfce स्थापना गर्नुपर्‍यो ... र यो भयानक देखिन्थ्यो। तर यी दिनहरू मध्ये एक, म लोडमा फर्कन्छु र यसलाई स्थापना गर्न प्रयास गर्दछु। म मेरो स्लकी यद्यपि सम्झना गर्दैछुः सी
के तपाईंले ग्राफिक्स स्थापना गर्नुभयो? तर अर्को तर्फ यो मलाई भूतहरू जस्तै लाग्न सक्छ, विशेष गरी dbus जुन तपाईंले थप्नु भएन।
केडीई? यदि तपाइँले मलाई अनुमति दिनु भएमा, म यहाँ केडीई संग आर्च लिनक्स स्थापना गर्नका लागि गाईड राख्न सक्छु र त्यहाँ सबैलाई कुनै पनी श doubts्का छोड्न दिनुहोस्
ठिक छ, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, चरण-देखि कदम प्रविष्टि गरेर प्रविष्टि गर्नुहोस् ... मलाई यसको XD चाहिन्छ
ठीक छ, यदि तपाइँ ग्राफिक्स स्थापना गर्नुहुन्छ।
राम्रो अगाडि जानुहोस्, तपाईं यहाँ एक खाता र सबै कुरा छ ... तपाईं बस यो गर्न शुरू र यो हो, जब तपाईं यो समाप्त हुन्छ तपाईं मलाई ईमेल द्वारा पोष्ट स्वीकृत गर्न सूचित गर्नुहोस् 😉
रोमन .77 भन्यो
आर्च सिक्नको लागि महान छ, विकी अद्भुत छ ... म लगभग १ बर्षदेखि आर्कसँगै छु। मैले सोचेको थिइनँ कि यो यति स्थिर हुने छ यति हालको।
तपाईले उल्लेख गर्नु भनेको खराब हो ... र हो, हामी एक राम्रो इन्टर्नेट जडानमा निर्भर छौं, तर ... कुन डिस्ट्रोलाई यसको आवश्यकता छैन?
रोमन to77 लाई जवाफ दिनुहोस्
यो कनेक्शन समस्याहरूको लागि लाजमर्दो छ, यद्यपि तपाईं र अन्यको बीचमा र अन्य अरूले AUR समान स्थानीय भण्डार कायम गर्न सक्दछन्। जे होस् स्पष्ट रूपमा यसलाई लिनको लागि स्थिर काम लिन्छ स्रोतहरू अपडेट गर्न र tar.xz बाट pkg.tar.xz मा जान, स्पष्ट रूपमा तपाईले आवश्यक पर्ने प्याकेजहरूसँग।
जे होस् म तपाईंलाई केहि भन्दछु, एलाव AUR रेपो प्रयोग गरेर कोर, कम्युनिटी, अतिरिक्त प्रयोग गर्ने जस्तो छ जब यो कनेक्शनको कुरा आउँछ।
म वास्तवमा AURs बिल्कुल प्रयोग गर्दिन, अनुप्रयोगहरू जुन मैले AURs मा पाउँछु मलाई मात्र उनीहरूको आवश्यक पर्दैन, वा तिनीहरू तत्काल छैनन्।
आर्क स्थापना मलाई समस्या भइरहेको छ।
यदि तपाइँ विवादास्पद प्याकेजहरू चयन गर्नमा गल्ती गर्नुहुन्छ, र त्यहाँ सयौं छन्, KISS ले सजिलै गडबडी ठीक गर्न अनुमति दिदैन। त्यो हो, यदि तपाईंले मलाई योमा जानु भयो भने यो LMDE भन्दा राम्रो छ।
अब म चक्र असाधारण स्थापनाको साथ छु, मेरो विचार सबै डिस्ट्रोसको लागि उत्तम हो, तर यसमा AUR छैन, उदाहरणका लागि फ्रीसेभ एक उपद्रव हो - उबुन्टु, LMDE, Sabayon वा SUse स्थापनाको तुलनामा जुन मैले प्रयास गरेको थिएँ।
म चक्रलाई कहेलसँग बदल्ने बारेमा सोच्दै छु, जुन मलाई पूर्ण रूपमा आर्च छ र स्थापनामा KISS पनि छ किनकि मैले धेरै GDM, GNome / XFCE / केडीई स्थापना गर्न सक्दछु। र मसँग पीपीएहरूमा पहुँच हुनेछ।
एउटा चुनौती: मल्टिस्टाइमको लागि आर्चमा काम गर्ने प्याकेज हो, जुन म डिस्ट्रॉस टेस्ट गर्न प्रयोग गर्दछु, र यसले उबन्टुमा मात्र राम्रो काम गर्दछ - म मिन्ट १२ मा पनि सोच्छु - LMDE मा अन्तिम अपडेट भएदेखि यसले मलाई यो गर्न दिँदैन, तर यसले काम गर्दछ।
उह, तपाईले पाक्सम्यानलाई केहि पनि गर्नु भएको छैन जुन तपाईलाई अनडू गर्न सक्नुहुन्न, जबसम्म तपाई आफ्नो प्रणाली यति लोड गर्नुहुन्न कि कन्सोलले तपाईलाई लोड पनि गर्दैन। र म फेरि भन्छु कि विकीको चरणहरू अनुसरण गर्दा स्थापना गर्न कुनै नोक्सान छैन।
यदि मैले गलत गरिन भने, मल्टीसिस्टम AUR मा छ: https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=33187
yaourt -S बहुबुट
Kagan लाई जवाफ दिनुहोस्
MMM मलाई लाग्छ अस्तित्व जटिल छ।
आर्क मेरो लागि धेरै सजिलो छ, धेरै आधारभूत ज्ञानको साथ।
साधारणतया Wiki (अंग्रेजी) चरण by चरण अनुसरण गर्नुहोस्।
म मोतीहरूको लागि आर्च + जीनोम use प्रयोग गर्दछु।
धेरै तीरंदाजहरू, तिनीहरूले तपाईंको प्रयोगकर्ता एजेन्ट ठीक गरे कि गर्दैनन् भनेर हेर्नका लागि।
ठीक छ, म बिल्कुल विपरीत दिशामा छु: D म छोटो समयको लागि आर्कसँगै छु र तपाईं जे भन्छु राम्रो र नराम्रो कुरामा म सहमत छु। मैले अन्य डिस्ट्रोजहरू जस्तै टकसाल (मलाई यो मनपर्दछ), उबन्टु, फेडोरा, ओपनसयूएसई प्रयास गरेको छु ... तर उबुन्टुसँग मैले भनेँ: "ठीक छ, मैले सबै चढेको छु र सबै भयो, यो राम्रो छ र कुन र कुन ... र?"। म केहि खोज्दै थिएँ जसले मलाई नौसिखाहरू र सामान्य लिनक्स प्रयोगकर्ताको रूपमा सिक्न बाध्य पार्छ। म आर्च भर आए र मलाई यो मन पर्थ्यो। अब मैले पत्ता लगाए कि डेबियनसँग यसको हल्का वा सुपरलाइट संस्करण छ र मैले आर्चको दर्शन अनुसरण गर्दै यस बारेमा अझ बढी जान्न स्थापना गरें। मलाई लाग्छ तपाईले पहिले नै आर्चब्या ((आर्क + ओपनबक्स) लाई चिनेका छौ किनकि मैले क्रunchचब्या ((डेबियन + ओपनबक्स) पनि पत्ता लगाएको छु। मैले क्रुक्स पनि परीक्षण गरे (जहाँ आर्कमा आधारित थियो)। जे भए पनि आर्चमा स्वागत छ, म पूर्ण रूपमा गएको छैन, तर मँ तपाईले जे भन्छु राम्रो र नराम्रो कुरामा म पूर्ण सहमत छु। मेरो लागि, एक धेरै ठूलो वितरण जुन म चाहान्छु मैले धेरै पहिले भेट्टाएको थिएँ।
सामाजिक नेटवर्कहरू र फायरस्ट्याटसको साथ हाम्रो माइक्रोब्लग प्रबन्ध गर्नुहोस्
यस उपकरणले लिनक्ससँग राम्रोसँग काम गर्दैन - मैले कुन लग्समा हेर्नु पर्छ?